Fanabeazana ny fandriam-pahalemana AFRICA: fitaovana enti-miady amin'ny herisetra any Afrika - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Fanabeazana ny fandriam-pahalemana AFRICA: fitaovana enti-miady amin'ny herisetra atsy Afrika
Septambra 17, 2021 Opinion 0
Dada, 15 taona sy ny zanany vavy Hussaina, ao an-trano ao amin'ny toeram-pialokalofana iray any Maiduguri, Borno State, Nizeria. 12 taona i Dada rehefa nalain'i Boko Haram izy sy ny zokiny vavy. (SARY: UNICEF / Ashley Gilbertson VII)
(Navoaka avy amin'ny: Diplomasia maoderina. 19 Mey 2021)
Manerana an'izao tontolo izao, ny fiovan'ny fiaraha-monina mankany amin'ny fivoarana sy ny fandriam-pahalemana maharitra dia misy ifandraisany amin'ny revolisiona mahery setra. Na dia marina marimarina aza ny adihevitra, ny fomba fanao tsy misy herisetra dia miteraka fahaizana manome vokatra mitovy amin'izany. Ny fomba fanao tsy misy herisetra dia maniry ny hanova tsikelikely ny fisainan'ny olona, ​​ka miteraka ny famahana na ny fanovana ireo fifanolanana manjaka eo amin'ny fiaraha-monina. Amin'izany fomba izany dia azo ny fahombiazana fanampiny, satria ailikilika ny fijaliana marobe.
Amin'ny raharahan'i Afrika, ireo fanjakana taorian'ny fanjanahantany dia tototry ny fifanoherana nanomboka tamin'ny krizy anaty ka hatrany amin'ny adim-poko sy isam-paritra. Mifanaraka amin'izany, niharan'ny fanimbana ara-toekarena sy fotodrafitrasa i Afrika, miaraka amin'ny fanimbana ara-tsosialy sy ara-tsaina ho an'ny olona tsirairay. Vokatr'izany, mpitsoa-ponenana goavambe sy olona nafindra toerana ao anatiny mitaky fialofana, fiarovana ary fivelomana no nipoitra, vokatr'izany. Ny anton'izany dia nametraka ny filan'ny fanohanana kritika an'ireo vondron'olona afrikanina marefo, nafindra toerana ary voahilikilika. Na eo aza izany, mba hamerana ny fandatsahan-dra sy ny fijalian'ny fiarahamonina afrikanina, ny dingana tafiditra dia tsy mahery setra.
Mba hanampiana ny adihevitra tsy misy herisetra, nilaza i Maria Montessori, mpanabe malaza, hoe: "Ny fametrahana fandriampahalemana dia asan'ny fanabeazana. Ny hany azon'ny politika atao dia ny mitazona antsika tsy hiady ”. Manondro ny fomba hanovan'ny fanabeazana ny toe-tsain'ny olona tsirairay ary hanamboatra làlana mankany amin'ny fandriampahalemana. Ny fampidirana ny fanabeazana amin'ny fiantohana ny fiarahamonina milamina dia tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny fomba fanao tsy misy herisetra, ary io fotokevitra io ihany dia namboarin'ireo fanjakana maro tatsy Afrika. Tahaka ny fivorian'ny fivorian'ny kaonferansa minisitra momba ny fanjakana taorian'ny ady sy ny fanjakana marefo ny volana jona 2004, nataon'ny Association for the Development of Education in Africa (ADEA). Nandritra io fivoriana io dia nisy sonia iray natao sonia teo amin'ireo fanjakana afrikanina 20, ary niforona ny Inter-Country Quality Node on Peace Education (ICQN-PE). Eo ambanin'izany, ny minisitry ny fanabeazam-pirenena any amin'ny fanjakana afrikanina dia notakiana ny hanova ny rafi-pampianarany ho masoivohon'ny hery, hampiroborobo ny fandriampahalemana, ny fisorohana ny fifandonana, ny famahana ny fifanolanana ary ny fananganana firenena. Vokatr'izany, ny ICQN Peace Education dia namolavola drafitra stratejika hiasa ho ivon-toerana foibe amin'ny fambolena soatoavina, toetra, fahalalana ary fahaiza-manao; izany rehetra izany dia handray anjara amin'ny fampandrosoana ny fandriam-pahalemana maharitra amin'ny alàlan'ny tsy herisetra ho an'ny olona Afrikana, ary ny fampandrosoana any amin'ny faritr'i Afrika.
Tamin'izany no nilazan'i ICQN sokajy manokana ny tanjony. Voalohany indrindra, ny ICQN Peace Education dia mikendry ny hanomboka fifanakalozana sy fifanakalozan-kevitra intra afrikanina, vokatr'izany, famporisihana ho an'ny fampandrosoana maharitra amin'ny alàlan'ny departemantan'ny fampianarana. Toy izany koa, izy ireo dia mitazona ny faniriana amin'ny famolavolana, fanamafisana ary fampiharana ny politika sy ny paikadim-panabeazana momba ny fandriam-pahalemana. Aorian'izay, ho azo antoka ny fampiharana, fanaraha-maso ary fanombanana ny fandaharam-pianarana fandriam-pahalemana. Ankoatr'izay, ny tanjon'ny ICQN Peace Education dia ny hanangana fahaiza-manao Fampianarana Fandriam-pahalemana amin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny fiarahamonina afrikanina; izay hikolokolo ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny samy fitsipi-pifehezana, ny isam-paritra ary ny sehatra maro sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandray anjara marobe. Ho vokany, ny fikarohana mahomby dia hamboarina, hitarika amin'ny famokarana fahalalana mahomby. Izany dia hitarika amin'ny fampivoarana ny politikam-pahalalana izay miteraka fampiharana amin'ny fomba mahomby ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana.
Ny firosoana amin'ny fahazoana ireo tanjona malalaka ireo dia hitaky ireto hetsika manaraka ataon'ny ICQN Peace Education ireto. Amin'ny voalohany, ny hetsika fifanakalozan-kevitra momba ny politika dia hatao eo amin'ireo minisitry ny fanabeazam-pirenena voatondro, sy ireo mpandray anjara hafa mifandraika amin'izany izay avy amin'ny faritra misy ny krizy sy ny krizy. Amin'izany fomba izany dia hatao ny fanadihadiana mahomby, ny antontan-taratasy ary ny fanaparitahana ireo zavatra vita an-tsoratra sy loharanom-pahalalana. Vokatr'izany dia hipoitra ny fahatakarana lalindalina kokoa ny fifanolanana, ary hampiroboroboana ny fomba fanao mampandroso ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fanabeazana. Ankoatr'izay, ny fandraisana andraikitra amin'ny fananganana fahaiza-manao dia hitarika amin'ny alàlan'ny famoahana sy loharanom-pahalalana azo antoka, izay hatambatra ho fitaovana ho an'ny politika mahomby sy ny fampiharana ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana. Ho fanampin'izany, ny fifanakalozana fahaiza-manao afrikanina afrikanina momba ny fandriam-pahalemana amin'ny fanabeazana dia ho entina hanamorana ny famoronana tambajotranà mpisehatra amin'ny fanabeazana mitondra fahaizana amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana avy amin'ireo firenena iharan'ny ady. Farany, ny mpihetsiketsika amin'ny fiarahamonim-pirenena dia hifampidinihana ary hampidirina amin'ny fizotran'ny fifanakalozan-kevitra momba ny politika, mba hiantohana ny lesoka eo amin'ny politika sy ny traikefa an-kianja. Amin'ny ankapobeny, ireo dingana ireo dia hiantohana ny fanabeazana fandriam-pahalemana mahomby ho an'ny fandriam-pahalemana maharitra any Afrika amin'ny alàlan'ny tsy fanaovana herisetra.
Ny fidiran'ny fanabeazam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana ICQN dia azo hamakafaka amin'ny alàlan'ny asany any Nizeria. Izy no fanjakana be mponina indrindra ao amin'ny kaontinanta afrikanina, i Nizeria dia miatrika fanamby maro izay miditra amin'ny endrika fifandonana, manomboka amin'ny fifanenjanana ara-politika ka hatramin'ny adim-pinoana mahery setra sy ara-poko. Ireo anton-javatra ireo dia nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fampandrosoana ny firenena; satria navela tsy nisy mpiambina izy ireo. Vokatr'izany, ny fisian'ny fifandonana dia namboarina ho anisan'ny kolontsain'izy ireo. Vokatr'izany, ny taranaka ankehitriny dia nanaiky ny fifanolanana na tsy nitondra fahalalana firy amin'ny famahana izany. Noho izany, ny fampidirana ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana amin'ny fandaharam-pianarana ao Nizeria dia zava-dehibe amin'ny fanovana sy fampivelarana ny toe-tsaina ary ny vokatr'ireo fihetsiky ny olona, ​​ary ny fananganana fiarahamonina mirindra sy milamina amin'ny alàlan'ny tsy fanaovana herisetra.
Ny fanamby sarotra indrindra momba an'i Nizeria dia azo raisina ho toy ny hetsika mpampihorohoro an'ny vondrona ara-pinoana tsy misy endrika fantatra amin'ny anarana hoe “Boko Haram” any Avaratr'i Nizeria, sy ireo vondrona mpitolona toa ny “Niger Delta Avenger” ary ny “Kongresin'ny Vahoaka Oodua” any amin'ny faritra atsimo an'ny fanjakana Nizeriana. Amin'ny ankapobeny, ireo vondrona ireo dia nisy fiantraikany tamin'ny fiadanam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ny fampihorohoroana dia nahatonga ny famotehana ny tanora, ny tahan'ny fahaizan'ny mamaky teny sy manoratra, ny tsy fananan'asa, ny famotehana ireo fotodrafitrasa ary ny toekarena mihena. Noho izany, nilaina mafy ny hampiditra ny ICQN Peace Education ho anisan'ny fandaharam-pianarana nasionaly; satria, izany dia hiteraka hery avy amin'ny taranaka ho avy momba ny fahaiza-manao ilaina amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy, ary ny fifehezana ny fidirana amin'ny fikambanana mahery fihetsika. Ao amin'ny rafi-pampianarana Nizeriana, ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana dia hampiofana ny olona amin'ny fisorohana sy fitantanana fifandonana mahery setra, fametrahana fifandraisana tsara kokoa amin'ny mpiara-belona, ​​firaisan-kina ary fiaraha-miasa eo amin'ny foko isan-karazany. Vokatr'izany dia hofoanana ny fitsarana an-tendrony, ny fitsaram-bahoaka, ary ny fankahalana ireo vondrona miovaova, ka hiteraka fiaraha-monina milamina / tsy misy herisetra.
Tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, Harris sy Morison (2003) dia nanambara fa ny fototra iorenan'ny fanovana sy ny fanavaozana ara-tsosialy dia nitaona ny sekoly, ny fiangonana ary ny vondron'olona. Noho izany, miaraka amin'ny fanabeazana, ny fanantenana ny fahavononan'ireo mpianatra handray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina dia hitombo, ary toy izany koa ny tsy firaharahiany ny herisetra sy ny ady. Natao izany, amin'ny fampiakarana ny vokatry ny ady, ny mpianatra dia hampivelatra ny fahaizana mamaha ny fifanolanana amin'ny fomba tsy misy herisetra. Ankoatr'izay, ny programa momba ny fandriam-pahalemana ICQN dia takiana amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa. Amin'izany fomba izany dia ho tratry ny tanora ny mpianatra ary hitombo ny fanahin'ny fandeferana. Izany dia hanome hery ny ankizy amin'ny fahalalana ilaina ny fandriam-pahalemana sy ny fahaiza-manao amin'ny famahana ny olana nefa tsy mampiasa herisetra. Ny fampianarana ny Fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana dia ahafahan'ny tanora tonga olom-pirenena vanona izay mitondra tena tsara amin'ny firenena.
Ao amin'ny rafi-pampianarana Nizeriana, ny zavatra lehibe napetraka arakaraka ireo fotokevitra tsy misy herisetra amin'ny Fampianarana fandriampahalemana ICQN dia toy izao manaraka izao. Voalohany, ampianarina ny mpianatra hanaja ny zony sy ny hasin'ny mpiara-belona aminy. Anisan'izany ny fivavahana, kolotsaina, foko ary firazanana rehetra. Ny fanantenana ambonin'izany dia ny famahana ny adim-pinoana, foko ary kolontsaina. Ny fanajana ny zon'ny tsirairay eo amin'ny fiaraha-monina, na inona na inona fiaviany dia mety hampihena ny fifandirana. Manampy izany, ny tsy herisetra dia ampiroboroboana miaraka amin'ny fahazoana fahamarinana amin'ny alàlan'ny fandresen-dahatra sy fahatakarana. Amin'ny alàlan'ny fahamarinana, ny olona any Nizeria dia tsy hanana antony handrisihana ny fifanolanana na hampitombo azy ireo. Ankoatr'izay, ny fizarana sy ny fampivelarana ny toetra sy ny fahaiza-miaina miaraka mirindra dia hampandroso ny fanilikilihana sy ny famoretan'ny olona sasany ao amin'ny fiarahamonina Nizeriana, ka hiteraka firaisan-kina. Ampianarina ny mpianatra hihaino sy hahatakatra amin'ny alàlan'ny fanomezana fotoana ho an'ny tsirairay hianatra sy hizara amin'ny onjampeo malalaka. Izany dia hampianatra ny fandeferana sy ny firaisan-kinan'ny mpianatra, ary izy ireo dia hankasitraka sy hanaiky fa ny olona rehetra eo amin'ny fiarahamonina dia miavaka sy samy hafa amin'ny fombany ary samy manana ny anjara birikiny amin'ny mpiara-belona na iza na iza foko, fiteny, fivavahany na kolontsainy. Ankoatr'izay dia ampianarina ny fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy, miantoka toerana mitovy ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fananganana ny fanjakana. Vokatr'izany dia hekena ny fifanolanana manakaiky ny fanavakavahana ny lahy sy ny vavy ary hiroso amin'ny famahana izany. Farany, nampianarina ny mpianatra fa manana ny heviny amin'ny fizotran'ny fanapaha-kevitry ny governemanta sy ny vondrom-piarahamonina onenan'izy ireo. Amin'izany fomba izany dia hampiditra ny tenany amin'ny fampiroboroboana ny fandeferana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fiaraha-monina izy ireo; tahaka ny hitrangan'izy ireo fa zava-dehibe ny fandraisan'izy ireo anjara. Mba hahatratrarana ny tanjon'ny Peace Education, ny fitaterana fitaovana izay miompana amin'ny fampivelarana ireo singa fototry ny Fanabeazam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana miaraka amin'ny fahalalana, fahaiza-manao ary soatoavina izay miaraka amin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina ankapobeny fandriam-pahalemana ao amin'ny mpianatra. Izany dia hiteraka famoronana kolontsaina fandriam-pahalemana eo amin'ny olona.
Na dia lavitra lavitra aza ny nahazoan'i Nizeria ny anjarany amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiaraha-miaina eo amin'ny fiarahamonina, ny fampiharana tsy misy herisetra an'ny Peace Education dia niantoka ny dingana mankany amin'izany lalana izany.
Na dia lavitra lavitra aza ny nahazoan'i Nizeria ny anjarany amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiaraha-miaina eo amin'ny fiarahamonina, ny fampiharana tsy misy herisetra an'ny Peace Education dia niantoka ny dingana mankany amin'izany lalana izany. Raha ampiharina am-pahombiazana manerana ny faritra rehetra ao Nizeria ny Fanabeazam-pihavanana an'ny ICQN dia ho tratra ny tanjona farany. Na izany aza, misy ny tolo-kevitra sasantsasany hamongorana ny fizotrany toy izao. Voalohany, tokony hohamafisina ny fiofanana sy ny fampiofanana indray. Amin'izany fomba izany dia ahafahan'ny mpampianatra mahazo ny fahaizana sy ny fahalalana takiana amin'ny fampiasana teknika sy fomba sahaza azy, izay mampianatra sy hampiroborobo ny Fampianarana fandriampahalemana an'ny ICQN. Ankoatr'izay dia tokony hahena ny votoatin'ny fandaharam-pianarana Fianarana sosialy ary tokony horaisina ny fomba fanovana. Izany dia satria ny fanabeazam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana dia mety be loatra amin'ny atiny fandaharam-pianarana Studies Social. Noho izany, ny fanitsiana amin'ny atiny hafa dia tokony hatao mifanaraka amin'izany. Farany, ny votoatin'ny fandaharam-pianarana Fianarana sosialy hatreto amin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia tokony hojerena. Izany dia satria ny hevitra mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny Peace Education dia tokony ho hita taratra sy hamantatra. Ankoatr'izay, ny hevitra mifanohitra amin'ireo fitsipika ireo dia tokony hesorina tsy ho eo amin'ilay làlana. Toy ny, ny fifanoherana dia mety hampifangaro ny mpianatra; miteraka fanabeazana mahomby amin'ny Fandriampahalemana.
Ho famaranana, ny Inter-Country Quality Node on Peace Education (ICQN-PE) dia natsangan'ny Association for the Development of Education in Africa (ADEA), amin'ny fanantenana ny hanombohana dingana tsy misy herisetra hitondrana fandriampahalemana, fiaraha-miaina, sy ny fampandrosoana any amin'ny faritra afrikanina, izay feno fifanolanana lalina, mikasika ny fivavahana, ny foko, ny fivavahana, sns. Iray amin'ireo fanjakana izay nanomboka tamin'ny fomba mahomby ny fampianarana ny fandriam-pahalemana an'ny ICQN any Nizeria, ary nandray dingana lehibe hanovana ny sain'ny ho avy taranaka, hahatonga azy ireo handefitra sy hilamina kokoa. Ny tanjona faratampony dia ny hanova ny fiarahamonina nefa tsy hiditra amin'ny herisetra, izay nanombohan'i Nizeria sy ireo fanjakana afrikanina hafa dingana mankany amin'io lalana io.
# tsy herisetra
Ny fihaonana an-tampon'ny Great Lakes dia manadio ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana any an-tsekoly (Oganda)
Làlana mankany amin'ny fanabeazana fandriam-pahalemana: Fandriampahalemana sy herisetra amin'ny fomba fijerin'ny ankizy
Ny dian-tongotr'i Gandhi avy amin'i Predrag Cicovacki
Desambra 9, 2015 Fampitaham-baovao 0
Tokony harahina i Gandhi fa tsy hohajaina Fampisehoana ny fanoloran-tena nataon'i Mahatma K. Gandhi hahita lalan'ny fanafahana amin'ny valan'aretina herisetra dia voarakitra an-tsoratra tsara teo aloha. Ny olana afovoany [tohizo ny famakiana…] [tohizo ny famakiana…]
Mampiasa fanatanjahan-tena hampiroborobo ny fandriam-pahalemana sy ny fampidirana ao Nizeria
Jolay 23, 2019 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Nandritra ny ezaka natao hampiroboroboana ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana, Dr. Michael Sodipo dia nanangana ny Peace Initiative Network izay mampiasa fanabeazana sy fanatanjahantena hanomezana hery ny tanora sy ny vehivavy, ary mampihena ny fifanolanana misy eo amin'ny foko isan-karazany any amin'ny faritra avaratry ny firenena. [tohizo ny famakiana…]
Nankatoavin'ny praiminisitra Pakistan ny drafitr'asa hanatsarana ny fanabeazana momba ny zon'olombelona
Febroary 18, 2016 Vaovao sy hevi-dehibe 0
Ny praiminisitra Muhammad Nawaz Sharif, raha nankato ny volavolan-drafitra ho fanatsarana ny zon'olombelona ao Pakistan, dia nanome baiko hatrany fa 400 tapitrisa R ny vola homena ho an'ny fanabeazana ny zon'olombelona, ​​ny fanentanana, ny fanentanana, ny fikarohana ary ny fifandraisana. [tohizo ny famakiana…]